७० लाखको क्रेटा ४५ लाखमै ! छक्कै पार्ने गरि कसरी सम्भव भयो त ? हेर्नुहोस् यसरी भयो सम्भब – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/७० लाखको क्रेटा ४५ लाखमै ! छक्कै पार्ने गरि कसरी सम्भव भयो त ? हेर्नुहोस् यसरी भयो सम्भब
भन्सार छली चोरी पैठारी गरी काठमाडौँमा गाडी ल्याई नक्कली सवारी दर्ता किताबलगायतका कागजातहरु तयार गरी कारोबार हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको हो । त्यसरी सबै कागजात समेत नक्कली बनाएर भारतवाट चोरी गरेका गाडी नेपालमा बिक्रि गर्ने गरेको आधारमा ४ जना पक्राउ परेका हुन् । उक्त गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा ब्लु बुक बनाउनेलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो ।
पक्राउ पर्नेमा लमजुङ घर भई सामाखुसी बस्ने कमल बाबु भट्ट, भक्तपुर चाँगुनारायण बस्ने मधु सिलवाल र अरुण खड्का तथा शान्तिनगर बस्ने, मोरङका रेवतीरमण निरौला छन् । निरौलाको धन्दा देखेर त प्रहरी पनि छक्क पर्यो । उनले सबै सरकारी कागजात नक्कली बनाउने कारखाना नै खोलेका रहेछन् । निरौलाको डेराबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी कार्यालयका छाप, झोला, लाइसेन्स, राहदानी लगाएतका सामाग्री बरामद गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले जानकारी दियो ।
नगरपालिकाले सुरु गर्यो निःशुल्क ‘टेम्पो एम्बुलेन्स’ सेवा प्रारम्भ’